Soomaali lagu eedeeyey Kufsi gabar oo Canada 6 sano oo xabsi ah lagu xukumay – SBC
Soomaali lagu eedeeyey Kufsi gabar oo Canada 6 sano oo xabsi ah lagu xukumay
Posted by admin on September 17, 2011 Comments
Nin Soomaali ah oo magaciisa lagu sheegay Cabdikariim Maxamed Firin ayaa maxkamad ku taal magaalada Edmonton ee xarunta gobolka Alberta ee dalka Canada waxay ku xukuntey 6 sano oo xarig ah ka dib markii lagu eedeeyey in uu kufsi u geystey gabar 17 sano jir ah, isla markaana uu banaanka uga soo tuuray gurigiisa iyadoo dhiig ka qubanayo oo xiran Sigisaan ama Socks (Caga dabool) kaliya.
Ninkan ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu gurigiisa ku martiqaaday gabadhaasi uuna u sheegay in uu siin doono biir, balse markii uu guriga soo gashadey ayuu waydiistey galmood laakiin gabadha ayaa la sheegay inay ka biyo diiday hadalkaasi taasi oo keentey in Cabdikariin uu xoog u adeegsado macaamilka sariirta ee gabadhaasi, isagoo u geystey dhaawacyo halis ah oo dhanka xabad uu ka gaarsiiyey sida ay qortey jariidada Toronto Sun ee ka soo baxda magaalada Toronto ee dalka Canada.
Dhacdada kufsiga ee ninkan Soomaaliga ah lagu soo oogay ayaa dhacdey 16-kii August ee sanadkii 2008-dii waxaana mudo lagu hawlanaa kiiskan dacwadeed.
Dacwad oogaha maxkamada oo lagu magacaabo Avril Inglis ayaa sheegay in Mr Firin intii uu ku guda jiray galmada xooga ah uu adeegsadey cajirka galmada (Caar dabool) ama Condom iyadoo Booliisku ku soo qabteen ka dib markii ay arkeen gabadha oo dhiig ka qubanayo ayna ka qaadeen dheecada hidaha sidaha ee DNA-ga halka isagana DNA laga qaaday minada ama shahwada ragga ee laga dhexhelay caar daboolkii uu adeegsadey kufsiga.
Naeem Rauf oo ah qareenka daafacaya ninkan Soomaaliga ah ee kufsiga loo haysto ayaa sheegay in Firiin uu asal ka soo jeedo Soomaaliya isla markaana uu ku soo koray nolol rafaad ah oo uu ku hoyon jiray wadooyinka, isagoo waalidkiis ku quudin jirey lacagaha uu ka helo iibinta Gaaska & Saliida, isagoo sheegay in Aabihiis ay ku waayeen dagaaladii ka dhacay Soomaaliya.
Dooda qareenka ayaa loo fasiranayaa in uu ku doonayo in Cabdikariin Maxamed Firin inaan loo musaafurin wadanka Soomaaliya marka uu dhameysto xabsiga lixda sano ah ee lagu xukumay.